Alwaax quraarad caag ah | December 2019
Ugu Weyn Ee Alwaax quraarad caag ah
Qashinka loo yaqaan 'exotic', geedo timir ah oo ka dhalanaya dhalooyin caagag leh gacmahooda
Niyadjab kasta oo beerta ka dhiga beerta beertiisa si wanaagsan oo qurux badan. Laakiin way fududahay in la qabsado hawsha beerta marka loo eego qurxinta, sababtoo ah qurxinta beerta waa mid qaali ah waxayna u egtahay mid aan habboonayn. Haa, iyo sababta ay u nadiifinayso haddii qalabka loogu talagalay farshaxanka asalka ahi uu sax yahay farahaaga. Qodobkani waxa aanu kuu sheegi doonaa sida aad uga dhigi lahayd naqshadda rasmiga ah ee dhalada caaga ah iyo waxa aad u baahan tahay si aad u sameyso quruxda qalafsan ee qalafsan ee beerta - geedka timirta ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Alwaax quraarad caag ah 2019